स्थानीय सरकारमा निर्वाचित ६ हजार ५०० दलित महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन छन् । एक वडा सदस्यका भनाइमा, ‘उनीहरूलाई माइन्यूटमा सही गर्नमा सीमित गरिएको छ ।’
लक्ष्मी बस्नेत: खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–४ की दलित महिला वडा सदस्य भवानी महरालाई अहिले आफ्नो पद नै बोझिलो लाग्न थालेको छ । मधेशका गाउँमा घुम्टो ओढ्ने बुहारीहरू वडा सदस्य बनेकाले नातामा जेठाजु, ससुरा आदि पर्ने जनप्रतिनिधिसँग आँखा जुधाएर कुरा गर्न समेत कठिन हुने गरेको छ । भवानी भन्छिन्, “म त वडामै जान्न, कामै छैन किन जानु ? काम गर्नु भनेर कानूनमा पनि लेखिएको छैन ।”
भवानी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पनि छन् । अहिलेसम्म उनी न्यायिक समितिको कामका लागि हरेक बिहीबार र शुक्रबार नगरपालिका जाने गरेकी छन् । तर, न्यायिक समितिको कामले उनीमाथि धम्की आउन थालेको छ । भवानीलाई १५ चैतको राति १० बजे घरमै १०–१२ जनाको समूहले धम्की दियो । त्यसको भोलिपल्ट उनले इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयामा जाहेरी दिइन् । इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक दिनेश गौतमका अनुसार तीमध्ये खुशिलाल ठाकुर, दीपा महरा र फिरोज यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । तिनलाई छुटाउन कांगे्रस र राजपाका स्थानीय नेता सक्रिय छन् । यो प्रकरणले भवानी त्रसित छन् ।
-मीना सुनार , काठमाडौं महानगरपालिका–१
पार्वती भूल बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–४ की दलित महिला सदस्य हुन् । प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण पार्वती यसअघि दलित महिला संघ (फेडो) को जिल्ला उपाध्यक्ष थिइन् । हलिया मुक्तिका लागि सक्रिय उनका कुरा चुनाव अघि धेरैले सुन्थे । वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि उल्टो भयो । आफ्नै वडाध्यक्षले उनका प्रस्ताव पन्छाउन थाले ।
नगर र वडाबाट महिला र दलित लक्षित योजनाका प्रस्ताव अघि सार्दा ‘जनप्रतिनिधिले दलित र महिलाको मात्रै काम गरेर हुन्न, विकासको काम गर्नुपर्छ’ भन्न थालेको उनको कथन छ । वडाध्यक्ष मोहन चन्दले नै ‘किन चाहियो ?’ भन्न थालेपछि उनी निरुत्साहित छिन् । “शुरूशुरूमा आफूले गरेका निर्णयमा हामीलाई सही गर्न मात्र लगाउँथे, धेरै कराएपछि बैठकमा बोल्न चाहिं दिन थालेका छन्” पार्वती भन्छिन्, “हाम्रो काम चित्त नबुझी नबुझी वडाध्यक्षको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र भएको छ ।”
ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ की सुनिता नेपाली (दमाई) को दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित भएपछिको शुरूआती अनुभव उत्साहजनक थियो । वडा कार्यालय र गाउँपालिकामा हुने बैठकमा उनी नियमित पुग्थिन् । बैठकमा लामै छलफल हुन्थे । विस्तारै त्यो क्रम रोकियो । उनलाई पहिल्यै निर्णय भइसकेका माइन्यूटमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बोलाउन थालियो । उनले राखेका कुरा पनि सुन्न छाडियो । “जुन समुदायको कोटाबाट चुनाव लडें, उनीहरूकै लागि केही गर्न नसक्दा खिन्न छु” सुनिता भन्छिन्, “कतिले अर्को पटक चुनाव लड्नुपर्दैन भनेर सोध्छन्, म अझै तीन वर्ष बाँकी छ, पर्खनुस् भनेर टार्छु ।”
“म त वडामै जान्न, कामै छैन किन जानु ? काम गर्नु भनेर कानूनमा पनि लेखिएको छैन ।”
-भवानी महरा , मिर्चैया नगरपालिका–४
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरमै पनि निर्वाचित दलित महिला सदस्य भूमिकाविहीन छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–१ की दलित महिला सदस्य मीना सुनारले २०७५ फागुन महीनाको एक दिन एकैपल्ट चार वटा बैठकको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरिन् । उनका निम्ति त्यो पहिलो घटना थिएन । किनभने, दुई वर्ष यता वडामा ३/४ वटा बैठकको माइन्यूटमा एकै पटक हस्ताक्षर गर्ने चलन चलाइएको छ । आफू सहभागी नभएको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नै पर्ने बाध्यता छ । मीना भन्छिन्, “तपाईंहरूको निर्णयमा म हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्दा वडाध्यक्ष माइन्यूट बोकेरै आउनुहुन्छ, अर्कोपटक तिमीले भनेको योजनामा बजेट पारुँला भनेर फकाउनुहुन्छ ।”
ललितपुर महानगरपालिका–१४ बाट निर्वाचित दलित महिला सदस्य संगीता अछामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट आफ्नो वडामा महिलाका निम्ति तीनमहिने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिन् । जनप्रतिनिधिका रूपमा उनले गरेको काम यही हो । कार्यपालिका सदस्य समेत रहेकी संगीताले कार्यपालिका बैठकमा महिला र दलित समुदायका लागि काम गर्नुपर्ने कुरा राख्दा कैयौं पटक ‘जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ, दलित र महिला मात्र भनेर हुन्छ ?’ भन्ने जवाफ पाएकी छिन् ।
-नृपबहादुर वड, मेयर, धनगढी उपमहानगरपालिका
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १८ (३) मा वडा समिति वा वडाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनले स्थानीय कार्यपालिकाको कार्यविभाजन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावली बमोजिम हुने स्पष्ट गरेको छ । जसमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुनुपर्छ ।
ऐनको दफा १६ (ग) ले वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ, जसअन्तर्गत वडा समितिका सदस्यहरूको समन्वय र सहजीकरण गर्ने समेत उल्लेख छ । कार्यपालिकाको नियमावली नबन्दासम्म वडाभित्रको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, तथ्यांक अद्यावधिक तथा संरक्षण, विकास कार्य, नियमन कार्य, सिफारिश तथा प्रमाणित गर्ने लगायतका पाँच वटा बुँदामा समेटिएका ८० वटाभन्दा बढी काम गर्ने अधिकार वडासमितिलाई हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
२०६८ को जनगणना अनुसार दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ । निर्वाचन आयोगको आँकडा अनुसार देशभरिका वडामा ६ हजार ५६७ दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित छन् । “यति ठूलो संख्यामा दलित महिलाको मात्र होइन, दलित समुदायकै प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा अहिलेसम्म थिएन” अध्यक्ष सिजापति भन्छिन्, “दलित महिलाको यो ऐतिहासिक प्रतिनिधित्वको सदुपयोग हुनसकेको छैन । उनीहरूलाई माइन्यूटमा सही गर्नमा मात्र सीमित गरिनुहुन्न ।”